Blogs maaha Madal-iyaga oo ka dhigaya Qalab Suuqeyn Shirkadeed Weyn | Martech Zone
Sabtida, Oktoobar 27, 2007 Talaado, Maarso 27, 2012 Douglas Karr
Walaac soo noqnoqda oo la keeno marka laga hadlayo blogging-ka shirkad ahaan istiraatiijiyad ganacsi ayaa ah cabsida macaamiisha ay sii deynayaan cabashooyinkooda. Markii su'aashan lagu soo bandhigayay fasal aan sameeyay usbuucii hore, runtii waxaan seegay qodob muhiim ah oo aan inta badan ka hadlo. Xudunta tan waa farqiga u dhexeeya golaha iyo baloogga.
Muxuu ku kala soocayaa Blog-ka Madasha?
Dadku waxay booqdaan baloogyada ganacsiga si ay u dhisaan aqoonta shirkad, wax soo saar, ama adeeg intay dhisayaan xiriir ay la leeyihiin blogger-ka.
Dadku waxay booqdaan goleyaasha ganacsiga si ay gargaar u raadsadaan ama u fidiyaan gargaar.
On blog, blogger wuxuu furaa, hogaamiyaa oo wadaa wada hadalka. Goob fagaare ah, qof kastaa wuu awoodaa.
Kulan, waa wax iska caadi ah in martidu is caawiyaan. On blog ah, taasi waa wax aan caadi ahayn. Mar labaad, baloog-waraha ayaa wada wada hadalka.
Madashu waxay noqon kartaa mid gebi ahaanba u furan kaqeybgalka. Balooggu wuxuu yeelan karaa xakameyn dheeri ah oo ku saabsan dhexdhexaadinta faallooyinka iyo xitaa awoodda uu wax uga dhiiban karo gabi ahaanba.
Akhristayaasha baloogyada waxay badiyaa xiriir la sameeyeen baloog-baarka waxayna aad ugu habboon yihiin inay oggolaadaan oo difaacaan go'aanadooda. Goleyaashu waa wax yar oo bilaash ah oo dhammaantood ah halkaasoo booqdayaasha laga yaabo inay hogaamiyaan wax ka badan shirkadda lafteeda.
Kani waa Madal
Goorma ayey ahayd markii ugu dambaysay ee aad gasho goob oo aad hesho 'Madasha Adeegga Macaamiisha' oo aad ka bixi karto niyadjabkaaga shirkad? Aad uma badna halkaas? Maya… waa lagaa adkaan doonaa inaad mid hesho.
Inta badan shirarka ganacsiga waxaa loo adeegsadaa si loo yareeyo kharashyada taageerada iyadoo loo oggolaanayo dadka isticmaala inay caawiyaan isticmaaleyaasha kale. Barnaamijyada barnaamijku waa kufiican yihiin tan, waxaanan aad ugula talinayaa dadka inay tan u adeegsadaan istiraatiijiyad ay ku yareynayaan kharashaadka taageerada. Haddii shirkaddaadu leedahay API, waxaad ka heli doontaa adduunyo saaxiibbo ah oo diyaar u ah inay kaa caawiyaan kulankooda!
Dood-wadaagyada sidoo kale waa loo isticmaali karaa, gaar ahaan darajaynta, si looga codsado jawaab-celin ku saabsan tan ugu wanaagsan / ugu xun ee ay shirkaddu bixiso iyada oo aan la sii deynin dhammaan caqabadaha oo loo oggolaan dadka inay qayliyaan oo ay qayliyaan. Golayaasha waxay noqon karaan sahan la jawaab-celin… ka qiimo badan sahan keli ah.
Ma heli doontid iyaga oo loo adeegsado adeegga macaamiisha, in kastoo. Run ahaantii, waxay noqon doontaa wax yar oo laga xishoodo, miyaanay ahayn? Miyaad qiyaasi kartaa gole aad ku dhajin kartid sida shirkaddu kuugu qarxisay adiga marar badan? Shirkadaha oo dhami way dhacaan ama hal mar ayey fashilmaan another. ku rid dhammaanteed keydka dhexe ee adduunka si ay u aragto ma noqon karto istiraatiijiyadda ugu fiican!
Cabashooyinka adeegga macaamiisha, foomka xiriirka fiican ayaa u shaqeeya sida ugu fiican. Marka macaamiisha ay naga xanaaqsan yihiin, way qadariyaan soo bixitaanka, mararka qaarkoodna, waxay u muuqdaan inay buunbuuniyaan karti-darrada iyo saameynta ganacsigooda. Aasaasida gole ma ahan fikrad wanaagsan… laakiin u ogolaashada waddo fudud farsamayaashaada taageerada inay shaqsiyan ugu jawaabaan macaamiil xanaaqsan waa wax aan qiime lahayn.
Kani waa Blog
Farqiga ugu weyn ee dabeecadeed ee udhaxeeya golaha iyo baloogyada ayaa ah in wada hadalka golaha (sidoo kale loo yaqaan 'dun') uu bilaabo booqdaha. Fagaarayaasha badanaa waxay leeyihiin hogaamiyeyaal aan rasmi ahayn - kuwani dhab ahaan waa dad waayeel ah oo amra fiiro badan ama hagta wadahadalka gole, laakiin xitaa ma noqon karaan wakiil rasmi ah shirkadda. Boggu wuxuu leeyahay hoggaamiye rasmi ah, qoraaga boostada.
Wadahadalka madashu wuxuu ku bilaabmaa dun ay cid walba bilaabi karto, sida baaq caawimaad ama cabasho. Tan macnaheedu waxa weeye in shirkadda maamusha gogosha ay tahay inay ku falceliso wadahadalka oo aysan fursad u helin inay hoggaamiso wadahadalka. Waxay si otomaatig ah u yihiin difaaca, iyadoon loo eegin mawduuca. Marar dhif ah ayaan arkay faallooyin isku xidhan oo isu beddelay goob looga cawdo baloog mooyee in blogger-ku uu codsado cabashooyinka mooyee. Marar badan, waxaan arkay faallooyin ololaya oo si dhakhso leh 'u saaray' akhristayaasha kale ee baloogga - maadaama ay u muuqdaan inay yihiin taageerayaal waaweyn oo ganacsiga ah.
Qoraallo qoraal ah ayaa waxaa abuuray qoraaga boostada. Wixii shirkad blog ah, tani waa fure. Waxaa hubaal ah inaad naftaada u fureyso dhaliil marka la eego mowduuca boostada, laakiin faa'iidada ayaa ah inaad hesho si firfircoon u hogaamiso wadahadalka. Dadka wax ka faalloodaa waa macaamiil u yimid bartaada si ay aqoon ama xiriir kula raadsadaan.
Waa muhiim in labadooda loo kala saaro dabeecadaha iyo yoolalka dadka soo booqda, iyo waliba ujeedada loo adeegsanayo! Dadku uma booqdaan bartaada si ay uga cawdaan, waxay u booqdaan inay wax bartaan. Iyo baloogyada ayaa kuu siinaya hab badbaado leh oo aad ku dhisi karto xiriir aad la leedahay akhristayaashaada - iyadoo laga faa'iideysanayo aad wada hadalka.
Tags: boorsada dijitaalka ahcodkarnimolacag bixinta mobiladadhow isgaarsiinta goobtaNfcxawaaraha boggaSuuq Goobidxawaaraha goobta
Oktoobar 28, 2007 at 7:42 PM
Xiiso leh Waxaan la yaabanahay haddii aad qabatay qoraalkan aan qoray dhowr toddobaad ka hor oo isku dayay inaan sharaxo isku ekaanshaha u dhexeeya baloog iyo madal. http://www.jeffro2pt0.com/similarities-between-a-blog-and-forum/ Waxa ugu weyn ee u dhexeeya labada ayaa ah in baloog uu qorayo wada hadalka halka gole uu siinayo dadka isticmaala fursad ay ku bilaabaan doodooda.
Oktoobar 29, 2007 at 7:51 AM
Ma aanan sameynin, Jeffro2pt0, laakiin dhab ahaan waan tixraaci lahaa. Shaqo fiican oo tilmaamaysa kala duwanaanshaha jireed iyo isku ekaanta!
(Waxaan uga dambeeya DHAMMAAN aqrinteyda hada !!!)
Oktoobar 28, 2007 at 8:14 PM
Boosto aad u fiican. Waan layaabay sida badanaa rajadu u rabto goleyaal bogaggooda. Markii aan si qoto dheer u qodo, waxaan badanaa ogaadaa inay rabaan jawaab badan oo bulshada ah iyaga oo aan runtii rabin inay qoraan waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Rajadooda ayaa ah in macaamiishooda ay qabtaan shaqooyinka oo dhan. Waan jeclahay jawaabtaada ku saabsan farqiga, laakiin waa mid geesinimo leh. Qaar badan oo ka mid ah qorayaasha wax qora ayaa si xun ula falgeli doona fikradda ah in baloogyadu ay "xakameeyaan" wadahadalka. Shakhsi ahaan, waxaan u maleynayaa inay taasi tahay ujeedka. Blogs-ka ayaa laga akhrisan karaa kulammada maxaa yeelay cidina kuma qaylin karto ama ma carqaladeyn karto wadahadalka ku jira bartaada illaa aad u oggolaato mooyee.
Shirkadahana, wax ka muhiimsan ma jiraan.